Wararka - Shirka Badbaadada Shaqada
Shirka Badbaadada Shaqada
On Mar.1, 2020 Jitai Electronics Co., Ltd qabtay shir amniga shaqada by dept saarka. in qorshe loo sameeyo sanadkaan qaabeynta amniga shaqada.
Qorshaynta amniga shaqada sanadka 2020
Laga bilaabo Mar.1, 2020 ilaa Dec.31, 2020 waxaa jira saddex marxaladood:
Marxaladda koowaad: Mar.1 illaa Mar.31, dhammaan shaqaalaha dhammaan waaxyaha waxay soo mareen barashada gudbinta "mashruuca shaqada ee wax-ka-beddelka gaarka ah ee badbaadada shaqada" dib-u-kicinta iyo hagaajinta damiirka halista suurtagalka ah ee caddaynta iyo xoogsheegashada heer sare ee wax-ka-beddelka gaarka ah. Dhammaan waaxyaha waxay sii kordhiyeen yareynta iyo hirgelinta waxyaabaha ku jira mashruuca wax ka beddelka gaarka ah, iyagoo si ballaadhan u cabbiray awoodda qalabka iyo xarunta waaxdooda iyo xaaladda adeegsi iyadoo la hubinayo halista ka imaan karta haddii aan la helin indha la ', aag dhintay iyo in aan la marsiin dhaqdhaqaaqyada.
Marxaladda labaad: Abriil 1 illaa Sebtember 30, dhammaan waaxyaha jawaab-celinta waxay diirada saareen shaqaalaha muhiimka ah, qodobbada muhiimka ah iyo xiriiriyeyaasha muhiimka ah waxayna sameeyeen daboolis buuxa oo ku saabsan kormeerka webka oo buuxa. Ku-saleysnaanta hore-ilaalinta hore waxay u shaqeysaa dhammaan waaxyaha iyada oo si ballaadhan loo qiyaasay nambarka aasaasiga ah ee halista ah iyo xaaladda nabadgelyada ee dhammaan waaxyaha oo la iswaafajiyay mas'uuliyadda dhammaan heerarka waxayna qaadatay tallaabooyin dhab ah oo ku saabsan wax ka beddel buuxa iyo hubinta dhammaan khataraha ka iman kara gunta iyo cabbiraadaha hoos loo dhigay lana nidaamiyay iyada oo loo marayo.
Marxaladda Thrid: Oktoobar 1 illaa Dec.31, dhammaan waaxyaha waa inay ku saleeyaan dhammaan waaxyaha mas'uulka ka ah iyo wax ka beddelka gaarka ah si loo sii wanaajiyo loona xoojiyo saameynta wax ka beddelka gaarka ah.
1. Feejignaanta maamulka, caddeynta mas'uuliyadda, cabirka wax ka beddelka. Maamulaha guud, maareeyaha, agaasimaha shaqada, hogaamiye kooxeedka iyo dhamaan shaqaaluhu waa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan isku dubbaridkan halista suurtagalka ah ee tilmaamidda amniga shaqada. Si dhab ah u qaado mas'uuliyadaha, iskudhafka isku-dhafan ee adag isla markaana abaabul dhammaan shaqaaluhu waxay sameeyaan khataraha suurtagalka ah ee warbixinta iyo soo sheegida arrimaha la helay iyo shilalka heerarka badbaadada shaqada heer isla markiiba isla markaana wax laga beddelo oo la sameeyo diiwaangelin iyo dabagal kuwa kale oo aan lagu beddelin waqtiga.
2. In lasii xoojiyo tababarka waxbarashada iyo maaraynta goobaha shaqada. Inta lagu jiro muddada is-hubinta iyo sixitaanka khataraha ka iman kara, waxay fulin doontaa tababarro farsamo oo xoojin ah oo lagu xoojinayo dhammaan shaqaalaha oo si dhab ah loo hirgelinayo nidaamka tababarka shaqada ka hor. Waxay dejin doontaa jawi shaqo oo cufan oo nabadgelyo leh iyadoo la tababarayo, muxaadarooyin, hagitaan duurka ah iyo wixii la mid ah iyo sidoo kale astaamaha astaan ​​gelinta amniga, iftiinka taxaddarka nabadgelyada, dacaayadaha aqoonta amniga.
3. In la xoojiyo maaraynta xaaladaha degdegga ah, la abaabulo ku celcelinta xaaladaha degdegga ah. Si loo horumariyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya warshadda la tacaalida xaaladaha degdegga ah iyo dib u soo celinta naftooda iyo midba midka kale iyo ujeedo ku aaddan aagagga khatarta ah ee shirkadda iyo hannaannada halista ah si dhab ah u baaraan una beddelo una beddelo qorshe horay loo sii qorsheeyay ee wax-ka-beddelka xaaladaha degdegga ah iyo cabbiraadaha wax ka qabashada goobta iyadoo isla markaas la abaabulayo tababar qorsheyn qorsheysan oo joogto ah.
Shirkadeenu waxay si dhab ah u xukumi doontaa "hababka baaritaanka ee abaalmarinta iyo ciqaabta amniga shaqada" iyo nidaamyada qaraabada ah. Waxaa lagu abaalmarin doonaa himilooyinka shaqo ee sanadlaha ah. Waxaa si dhab ah loola dhaqmi doonaa ama loo ciqaabi doonaa waaxda ama shaqaalaha sababa shilka sababo la xiriira khataraha ka imaan kara ogeysiis la'aanta waqtigeeda. Waxay noqon doontaa mid digniin culus u leh kuwa ku xad gudba anshaxa waqtigeeda isla markaana waxaa lagu ciqaabayaa ciqaab kuwa dhowr ah oo dhowr jeer ku celceliya.